PHILADELPHIA ORCHID: TAARIIKHDA GEEDKA, SHARAXAADDA IYO SAWIRKA MUUQAALKA, IYO SIDOO KALE TILMAAMAHA DARYEELKA IYO DHALMADA - SOOSAARKA DALAGGA
Casaan caan ah: Philadelphia orchid iyo talo ku saabsan daryeelka iyo tarbiyadda guriga
Waxaa jira dad badan oo jecel dareen qurux badan oo jecel inay koraan a orchid qurux badan quruxdooda on windowsill ah, laakiin loogu talagalay huruud xubin u ah in ay tani waa shaqo adag.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira orodji Philadelphia dabeecadda, taas oo u muuqata weyn, laakiin sii kordhaya waa mid aad u fudud.
Phalaenopsis Philadelphia (schilleriana x stuartiana) - Philadelphia Orchid - waa orchid phalenopsis hybrid, oo ah wakiil ka mid ah dhirta cagaarshowga ah ee caleemaha ee Orchid ee ka yimid Koonfur Asiya iyo Australia.
Qeexida geedka iyo muuqaalka
Philadelphia waa warshad aad u qurux badan oo tayada ugu fiican ka heshay "waalidiinta" - Phalaenopsis of Schiller iyo Stuart. Caleemo-caleemo cagaaran iyo ubaxyo badan oo casaan-casaan leh ayaa siinaya geedka muuqaal cajiib ah. Isla mar ahaantaana ubax waa wax aan la qabin ee sii kordhaya.
Philadelphia waxay leedahay stem aad u gaaban, taas oo ah mid aan muuqan karin 3-6 caleemo fuudh ah, leh dherer 20-40 cm iyo width ah oo ku saabsan 10 cm.
Warshadu waxay leedahay nidaam xidideed oo horumar leh, wuxuu leeyahay khudaar-caleemo madow sababtoo ah joogitaanka xididdada chlorophylloo ka soo baxa caleemaha caleen, taas oo u oggolaaneysa in ay si toos ah hawada iyo nafaqooyinka uga soo jiidaan hawada. Maaddaama ay tahay dawada dabaysha, ma laha sifo pseudobulb ah orchids kale.
Peduncle waa tiro ka duwan - laga bilaabo 1 ilaa dhowr. Celcelis ahaan, dhererkoodu wuxuu gaaraa 60-70 cm, ilaa 20 ubax ayaa laga heli karaa hal pedunji hal mar. Burooyinkuna waxay haystaan ​​wakhti dheer waxayna bilaabaan si tartiib tartiib ah, taas oo u oggolaanaysa dhirtu inay ubaxdo dhowr bilood. Laakiin muddooyinka ubaxyada gaaban waa suurtagal, markaa waxay dhacaan sanad ka badan hal mar.
Ubaxa naftiisa, gaaraya 7-8 cm dhexroorka, waxay leeyihiin midab isku dhafan: inkastoo ay yihiin guduud-casaan, waxay leeyihiin xididado guduudan, xiirxumo brownish ah ee bartamaha, lafaha shimbiraha kala duwan ee casaanku waxay ku yaalaan wareegyada wareegyada. Lafaha dhexe, diida, wuxuu leeyahay "geeso" sababtoo ah kalsooni.
Ubaxyada ayaa si cad u jilicsan oo leh jilicsanaan iyo midabyo. Waxay ku badan tahay casaan, caddaan, jaale, kareem, mado guduud ah, midab cagaaran.
Sida xubnaha kale ee qoyska Orchid, geedka wuxuu kufilan yahay stamens, iyo pollination waxaa kaliya oo lagu sameeyaa cayayaankamaadaama ay mankaanku ka gudbi karin hawada.
Markii ugu horeysey ee Europe, orchid Phalaenopsis waxaa laga helay on Ambon Island ee magaalo Maluku qarnigii 17aad. Sanadkii 1825, caleemaha dhirta waxaa loo bixiyay magaca Phalaenopsis, taas oo macnaheedu yahay "aboorka", oo u egtahay balastar. Philadelphia waa iskudhaf laba nooc oo caan ah oo loo yaqaan 'phalaenopsis - Schiller (Phalaenopsis schilleriana) iyo Stuart (Phalaenopsis stuartiana), oo hadda jira xoolaha iyo taranka.
Orchids - warshad ballaaran, waxaa laga heli karaa dhammaan qaaradaha, marka laga reebo Antarctica. Philadelphia wuxuu ku koraa oo keliya xayndaabka qoyan iyo kaymaha buuraha ee Koonfur Asiya iyo waqooyi-bari Australia.
Philadelphia waa epiphyte, iyo orchids kale waa dhirta dabiiciga ah, sabab la mid ah, kuwii hore, ka duwan kii dambe, ma lahayn pseudobulbs.
Orchids waxay leeyihiin ubax waaweyn iyo mid yar, iyo phalaenopsis, dhammaantood waa kuwo waaweyn.
Phalaenopsis way fududahay in guriga lagu koro marka loo eego orchids kale.
Philadelphia, oo ka duwan orchids, ubax karaa karaa in ka badan hal jeer sanadka oo dhan.
Philadelphia waa mid ka mid ah beeralayda orchid ugu jecel, laakiin macluumaadka ku saabsan weli weli ma ku filan. Sawirro aad u caan ah, sawirro badan oo dhirta waa sawirrada ubax lilac-casaan. Dukaanka internetka waxaa lagu magacaabaa Phalaenopsis Philadelphia - 2 peduncle Pink D12 H50. Guud ahaan, Philadelphia, oo ah qalab ka mid ah laba kale phalaenopsis, Schiller iyo Stewart, iyada oo marin kasta oo calaamaduhu ka dhigayso calaamado yar oo ka duwan midabka caleemaha iyo ubaxa, xoogga urta.
Philadelphia Blooms aad u dhakhso badan: tiro badan oo ubax ah ku dhowaad isla markiiba Bloom, sida raxan ah ee Baalallay. Hybrid wuxuu kudhow karaa qiyaastii sannad dhan iyada oo aan nasasho nasasho dheer ah. Inta badan, ubax waxay dhacdaa muddada u dhaxaysa Febraayo-Maajo.
Muddada ubax ee dhirta kala duwan waa shakhsi.
Si loo soosaaro ubax, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo waraabinta, heerkulka habeenkii ilaa 12 ° C, abuuraan farqi u dhexeeya maalin iyo habeenba heerkulka 6 ° C. Xaaladaha noocan oo kale ah waxay u dhigmaan cimilada guga iyo kicinta dhirta si ay u bararaan.
Waxaad iyaga ku quudin kartaa Bacriminta potash-fosfate. Ka dib markii ubaxku gebi ahaanba ka weyn yahay, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo waraabinta hal mar 7-10 maalmood, iyo marka barbaariye qallajiyo, iska jar dhammaan gebi ahaan ama qayb ahaan, haddii dhoobo cusub si lama filaan ah u muuqata.
Haddii Philadelphia uusan barareynin, tallaabooyinkan soo socda waa in la sameeyaa: abuuro iftiin kala firdhisan iyo kala duwanaanta heerkulka habeenkii iyo habeenkaba ee ku saabsan 4-6 ° C, ka hortagga biyo joojinta, isticmaal bacriminta potassium-fosforus-nitrogenous, iyo xajinta orchid meel qabow iyo mugdi ah.
Tilmaamaha daryeelka tallaabo tallaabada ah
Meesha waa in la iftiimaa, laakiin aan lahayn qorraxda tooska ah. Si loo gaadho saameyntan, waxaad dabooli kartaa daaqada hoose ee warqadda.
Diyaarinta ciidda iyo dheriga.
Ciid - substrate - waxaa fiican inaad naftaada u sameyso. Si arrintan loo sameeyo, waxaad qaadan kartaa jilicsanaanta qallalan ee qallalan, foosto fiiqan sida perlite sida lakabka dheecaanka ee hoose ee dheriga, ciidka aan adkaa, peat, iyo dhirta sare. Dheriga waa in la qaataa si siman, gaaban, hufan, si iftiinku u gaaro xididada. Masaafada u dhexaysa xididada ilaa dhererka dheriga waa qiyaastii 3 cm geedka dhalinyarada.
Heerkulka gudaha waa in uu ahaado mid aad u sareysa: maalinta 22-26 ° C, habeenkii 16-20 ° C. Farqiga u dhexeeya maalin iyo habeenba heerkulka qiyaastii 6 ° C waxay kicisaa koritaanka orchids.
Ubaxa wuxuu jecel yahay qoyaan sare, sidaas darteed waa lagama maarmaan in la buufiyo maalin kasta oo kale oo marmarna hal mar maro maro qoyan.
Iftiiminta waxaa loo baahan yahay in la abuuro, oo ay ku jiraan wax caan ah, ku filan 10 saacadood, laakiin dharbaaxo - hooskii ama penumbra, iftiin aan iftiin lahayn, si aanay u gubin geedka qandhada.
Waraabinta Philadelphia waa inay ahaato mid sare, qubays. Inta lagu jiro xilliga ubax, usbuucii mar waraabinta biyo diirran ama biyo diirran, nasashada waa in la waraabiyaa mar kasta labadii asbuucba.
Dharka ugu sareeya.
Khubarada ayaa kugula talinaya inay dhar ka sameeyaan waraabinta saddexaad ee ubaxa. Waxaa ugu wanaagsan in si dhakhso ah looga iibsado dukaanka khaas ah oo isku dheelitiran oo loogu talagalay warshad la siiyay, si aan loogu khaldanayn hannaanka maaddooyinka iyo feejignaanta.
Ka dib markii Philadelphia waxaa laga iibsaday dukaanka, waa in isla markiiba lagu beeray dherarka la doortay, si loogu habeeyo, waa in laga saaraa meel gudcur ah dhowr toddobaad oo aan la waraabin. Mustaqbalka, waxaa loo rogi karaa labadii sanaba mar si loo cusboonaysiiyo substrate.
Sidee loo badiyaa?
Badanaa guriga Philadelphia waxaa lagu faafiyaa mid ka mid ah siyaabaha saddexda ah: carruurta, adoo qaybinaya rhizomes, mararka qaarkoodna gooyn.
Carruurtu way ku dhufan karaan marka ay u ogolaadaan. Ka dib marka dhabarka u muuqda ilmaha, waad iska deyn kartaa.
Waxaad kala qaybin kartaa rhizome laba goor wakhti kasta, kadibna geedi socodka dhirta kala duwan.
Cudurada hindisada Philadelphia badanaa waxay la xiriirtaa daryeel aan ku filneyn. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in si adag loo raaco xeerarka ugu muhiimsan, sida heerkulka, nalalka saxda ah, waraabinta waqtiga iyo bacariminta, qoyaanka lagama maarmaanka ah, dheriga hagaagsan. Sida qiyaas ka hortag ah, ka dib iibka, dhammaan xididdada waa in lagu shubo biyo, sii dheeraad ah laga gooyo kallana iyo waxyeello, ka dibna laguula dhaqmaa kakooban firfircoon.
Cayayaanka badani waxay halis u yihiin ubaxa: caddaan, cillado, aphids, caarada, mealybugsiyada. Waxaa lagama maarmaan ah in lala dagaallamo cayayaanka, ukunta iyo dirxiga leh cayayaanka, fungicides. Waa in la sameeyaa in ka badan hal mar, laakiin si kala duwan.
Philadelphia Orchid laga yaabaa inay ka farxiso milkiilaha leh ubax badan oo dheeraadka ah inta lagu guda jiro sanadka, si taxaddar leh waxaa loo fuliyaa iyada oo aan daryeel badan oo adag. Cabbitaanka saxda ah, taageero qoyaan, iftiin dhexdhexaad ah iyo daryeel kale ayaa ka caawin doonta Philadelphia inay noqoto ubax cajiib ah oo qurux badan.